I-Tokyo • Ukuhlikihlizwa komzimba kanye neNuRu Massage
Idolobha elihamba phambili emhlabeni, elitholakala ngokuhumusha. Ungabi namahloni - bhukha iTokyo yakho yeNuru.
ITokyo (東京, Tōkyō) iyinhloko-dolobha yaseJapane nedolobha elikhulu kunawo wonke emhlabeni. Futhi ingesinye sezifunda zaseJapan ezingama-47, eziqukethe amawadi amadolobha amaphakathi angama-23 namadolobha amaningi, amadolobha nemizana esentshonalanga enkabeni yedolobha. I-Tokyo iyikhaya le- UNuru Massage. Hlola i- umzimba futhi ukusebenza komzimba izinketho futhi.